Home Wararka Maxakamadda Ciidamada waa inay Fahad Ka joojisaa inuu Xil Qabto iyo...
Maxakamadda Ciidamada waa inay Fahad Ka joojisaa inuu Xil Qabto iyo Inuu Is Sharraxo.!
Sida ku cad warsaxafadeedka ka soo baxay xafiiska RW dalka Mudane Rooble waxaa muuqata in loo baahan yahay in Fahad Yasiin laga joojiyo inuu dalka xil ka qabto inta ay kala caddaaneyso lugta uu ku leeyahay Dacwadda hortaalla Maxkamadda Ciidamada ee ku aadaan Sarkaalka uu madaxda u ahaa ee Ikram Tahliil Faarax, kuna maqan gacanta hay’adda uu madaxda ka yahay.
Guud ahaan dacwaddaan waxay dalkan u abureysaa aragti cusub oo ah in madaxda iyo dadka awoodda leh aysan ku takri fali karin shuruucda dalka. Dalka waxaa uu leeyahay shuruuc ku filan in lagu kala baxo laguna dhaqo oo haddii si fiican loou dhaqmo wax badan ay ku hagaagi karaan. Laakiin khaterta joogtada noqotay waa inaan lagu dhaqmin inta qoran waxaana mar waliba la sheegaa inay wax kadhiman yihiin oo uu dhameystir u baahan yihiin shuruucda dalka oo uu ugu horreeyo distuurka dalka oo qabyo lagu sheego.
Dacwadda Ikraam waxay u muuqata inay tahay dacwad wax badan oo qarsoonaa soo bandhigi doonta, waxaana laga yabaa xataa in uu Farmajo ku lug leeyahay waayo mar waliba waxaa uu isku dayaa inuu waddada sharciga ka leexiyo oo xaal mastuue lagu dhameeyo ama wiifto carqalad ah soo tuuro.
Dadka Somaliyeed waxay is weydiinayaan muxuu Farmajo u diidan yahay inay dacwadda marto waddeeda saxda oo la soo helo dadkii dambiga geystay, kadibna laga gooyo wixii ay galeen haddii uusan isaga ku jirin dadka ay galaafan karto.
Ikram waxay u noqotay Fahad Yasiin kaaliye gaar ah oo isaga toos ula shaqeysa, kadib intaan meelo kale loo wareejin, waxaana laga yabaa inay indhaheedu qabteen fal dambiyeedyo uu ku lug leeyahay Fahad iyo madax kale oo ay ku jiri karaan Cabdullaahi Kulane iyo Xataa Madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday, halkaasna uu ka soo gaaray dhibka Ikraam la kulantay oo ilaa maanta aan lagu hayn geri iyo nolol.
Waa kuma Fahad Yasiin?
Fahad Yasiin waa nin is qariya, oo aan lagu arkin fagaareyaasha iyo goobaha ay dadku kulmaan, islamarkaasna aan kasoo muuqan warbaahinta wixii ka dambeeyay markii uu TV-ga Aljazeera u shaqeynayey. Xataa Sawirada iyo muuqaalada laga hayo waa kooban yihiin taas oo astaan buuxda u ah in uusan dooneynin in laga helo maclumaadka la xiriira shaqadiisa iyo shaqsiyadiisaba waa na dhaqan lagu yaqaanno Mukhaaraadka si qarsoon fal dambiyeedyo u fuliya ama kooxaha burcadka oo mar waliba is qariya.
Ma laha Fahad yasiin inta la og yahay bogagga baraha bulshada, mana bixiyo wareysiyo oo majiraan hadallo uu jeediyo. Waxaa lagu sheegaa in uu yahay nin aad loo ilaaliyo, oo aan si sahlan lagu arki karin.
Ikram waxay muddo ahayd qofka ugu dambeeya ee aad la kulmeysid inta aan isaga laguu gudbin. Waana sababta keeneysa in maanta aad loo aaminsan yahay inuu yahay shakhsiyad wax badan ka og nolosha iyo geerida uu xafiiskiisa baahiyey ee Ikram, waana sax inay maxkamadaha dalka ka wareystaan macluumaadka la xiriira sdhimashada iyo maqnaanta Sarkaalkaas qarankeeda u shaqeynayeysay ee ku maqan gacanta hay’addii uu xukumayey.
Sidoo kale waa in Maxakamadaha ay ka joojiyaan Fahad Yasiin Xaaji Dahir inuu wax xil ah qabto ama uu isu taago doorasho nooc kasta oo ay tahay maadaama uu gal dacwaded ka dhan ah oo ka furan yahay Xeer ilaalinta Maxakamadda Ciidamada.